Serivisy aorian'ny varotra sy raharaha - Yantai Jiajia Instrument Co., Ltd.
Serivisy sy raharaha aorinan'ny varotra
Manolora fampianarana sy torolalana.
1 taona fiantohana. Aorian'ny fahazoana ny entana dia afaka mifandray aminay ny serivisy aorian'ny varotra ny mpanjifa raha misy ny olana.
Raha voamarina ny vokatra aorian'ny nahazoana azy, fa manana olana amin'ny fandeferana mandritra ny fampiasana, dia afaka manolotra fikajiana maimaimpoana koa izahay, ny mpanjifa dia mila mandoa ny vidin'ny fandefasana.
Noho ny toetran'ny lanja, ny kilasy F2 / M1 na ambany ihany no afaka 2nd calibrated.
Ny mpanjifanay tsara tarehy izay nividy mizana countertop counter-slip ary nandefa anay ny sariny niaraka tamin'ny entanay. Misaotra ny fahatokisany sy ny valinteninao tsara.
* Ny lanjan'ny kalibration ho an'ny metatra hamandoana
Ny metatra mando dia be mpampiasa amin'ny laboratoara na amin'ny dingam-pamokarana izay mila mandrefy ny atiny hamandoana haingana. Toy ny indostrian'ny fanafody, indostrian'ny sakafo, indostrian'ny simika, fambolena sns.
Ahoana ny fomba hamehezana ny metatra hamandoana amin'ny lanjany?
Tohizo ny bokotra ZERO mandritra ny fanjakana 0,00g.
Rehefa manelatselatra ny efijery dia asio moramora 100g eo amin'ny fitoeran-jiro ohatra. Hiakatra haingana kokoa ny sandany, dia miandrasa mandra-pijanonan'ny famakiana amin'ny 100.00.
Esory ny lanjany, miverena amin'ny maody fitsapana, vita ny dingan'ny fanamafisana.
Ny metatra hamandoana vaovao dia tokony hodiovina alohan'ny hampiasana azy. Rehefa ampiasaina matetika izy io, dia mila hopetahany vilona matetika koa. Ny fisafidianana ny lanjany marina arakaraka ny maha-marina ny metatra hamandoana ho an'ny fanitsiana dia zava-dehibe. Makà torohevitra eto.
* Ny lanjan'ny kalibration ho an'ny mizana elektronika
Amin'ny ankapobeny, ny mizana elektronika dia tokony hamboarina amin'ny 1/2 na 1/3 amin'ny ambaratonga feno. Ny fizotran'ny fanitsiana mahazatra dia eto ambany:
Alefaso ny mizana, manafana mandritra ny 15 minitra ary alao am-pahatoniana 0 bit. Avy eo ampiasao ny lanjany handanjalanjana ny filaharany, toy ny 1kg / 2kg / 3kg / 4kg / 5kg, mitazona ny famakiana ho mitovy lanja amin'ny lanjany, vita ny fizotran'ny fanamafisana.
Ny mizana isan-karazany dia mila kilasy fandanjana samy hafa:
Ny fandanjalanjana miaraka amin'ny fandeferana 1/100000 ary ny refy ambany indrindra 0.01mg dia ny fandanjalanjana avo lenta. Mila ampifanarahana amin'ny lanja E1 na E2 izany.
Ny fandanjalanjana amin'ny fandeferana 1/10000 sy ny refy kely indrindra 0.1mg dia hampiasa ny lanjan'ny E2 hanamafisana.
Ny fandanjalanjana amin'ny fandeferana 1/1000 sy ny refy 1mg ambany indrindra dia hampiasa ny lanjan'ny E2 na F1 hampifanarahana.
Ny fandanjalanjana miaraka amin'ny fandeferana 1/100 sy ny refy ambany indrindra 0.01g dia hampiasa ny lanjan'ny F1 hanamafisana.
Ny mizana miaraka amin'ny fandeferana 1/100 sy ny refy farany ambany 0.1g dia hampiasa ny lanjan'ny M1 hampihenjana.
Ny mizana sy ny mizana dia azo ampifanarahana amin'ny lanjany sy ny lanjan'ny kilasy.
* Fitsapana enta-mavesatra
Fomba mahazatra amin'ny fitsapana famoahana ny ascenseur izany. Ny fitsapana ny lanjan'ny ascenseur dia mila mampiasa ny lanjany ihany koa. Ny singa mizana amin'ny ascenseur dia iray amin'ireo masontsivana lehibe indrindra amin'ny ascenseur fidirana, ary ny masontsivana manan-danja ho an'ny ascenseur azo antoka, azo itokisana, ahazoana aina. Amin'ny maha-asa manan-danja azy, ny fitsapana ny singa mandanjalanja dia tafiditra ao amin'ny tetikasa fanaraha-maso ny fanekena. Ny lanjan'ny vy 20kg "lanja mahitsizoro" (lanjan'ny M1 OIML mahazatra) miaraka amin'ny fandeferana 1g dia ampiasaina amin'ny fizahana ny ascenseur. Amin'ny ankapobeny, ny orinasan'ny ascenseur dia hamatsy lanja vy vy kely manomboka amin'ny 1 taonina ka hatramin'ny taonina maro.
Ny institiota fanaraha-maso fitaovana manokana koa dia mila mampiasa ny lanjan'ny vy ho an'ny fanaraha-maso ny famoahana ny ascenseur. Ny habe iraisana dia: ny lanjan'ny vy 20KG (mety amin'ny mora ampiasaina, mora entina), ary ny singa fanaraha-maso sasany dia hisafidy karazana vy 25kg.
* Fanamafisana ireo mizana boribory mavesatra amin'ny lanjany
* Fomba fanitsiana
Fampifanarahana amin'ny zoro: Misafidy lanja amin'ny sanda 1 / 3X (X fa tsy ny fahaizan'ny bigbridge), apetaho amin'ny zorony efatra amin'ny lampihazo ary lanjalanja tsirairay. Ny famakiana ny zoro efatra dia tsy azo atao noho ny fandeferana azo ekena.
Famaritana lamin'ny Linearity: safidio ny lanjany amin'ny 20% X sy 60% X, apetaho eo afovoan'ny hena boribory ireo. Aorian'ny fampitahana ny vakiteny amin'ny sanda lanja, ny fiviliana dia tsy tokony hihoatra ny fandeferana azo ekena.
Famaritana lignera: safidio ny lanjan'ny 20% X sy 60% X, apetraho eo afovoan'ny countertop ny lanjany, ny lanjany mahazatra, ary ny fampitahana dia tokony ampitahaina amin'ny lanjany mahazatra. Ny fiviliana dia tsy tokony hihoatra ny lesoka azo ekena.
Fampirantiana sanda fampirantiana: Salan'isa feno lanjan'ny lanjan'ny lanjany amin'ny ampahany 10, hametraka lanjany mahazatra mifanaraka amin'izany, asio lanjany mavesatra eo afovoan'ny brillage, avy eo soraty ny vakiteny.
* Fanamafisana ny mizana fiompiana
Ny mizana fiompiana dia zatra mandanja omby. Mba hitazonana ny maha-marina ny mizana, ny vy mavesatra dia azo ampiasaina handrindrana ny mizana fiompiana.
* Mizana mizana pallet
Izy io dia tafiditra ao anaty kamio sy paozy pallet miaraka. Miaraka amin'ny mizana kamiao pallet, ny fitaterana sy ny fandanjana dia azo atao miaraka amin'izay. Ataovy mahomby kokoa ny logistics an-trano miaraka amin'ny vidiny ambany.
* Mizana mizana
Ny mizana crane dia ampiasaina amin'ny fandanjana enta-mavesatra mihantona, miaraka amin'ny elanelam-potoana sy ny fahaizany milanja, manolotra vahaolana ho an'ny olana amin'ny fomba fandanjana enta-mavesatra be loatra tsy miankina amin'ny toetr'andro indostrialy ampiasaina amin'ny indostrian'ny vy, metallurgy, ozinina, toeram-pitrandrahana, tobim-pitaterana entana, logistika , varotra, atrikasa sns, toy ny famoahana, famoahana entana, fitaterana, fandrefesana, fametrahana, sns. mizana crane nomerika indostrialy azo zahana hatramin'ny 100kg ka hatramin'ny 50tonne capacities
Ny lanjan'ny fikajiana ny refy, Shear Beam Load Cell, Calibration lanjan'ny napetraka, Lanja voamarina, Ny lanjan'ny fikajiana ho an'ny mizana nomerika, Calibration Mass,